🥇 ▷ Tani waxay noqon kartaa taleefankii ugu horeeyey ee Xiaomi ee qaata Android 10 ✅
Tani waxay noqon kartaa taleefankii ugu horeeyey ee Xiaomi ee qaata Android 10
Google Wuxuu ka dhigay nidaamkiisii ​​ugu dambeeyay ee nidaamka hawlgalka rasmi ah: Android 10, cusboonaysiin la socota si weyn news sida Saldhigga tooska ah, Jawaabta casriga ah, cod cod-weyne, Jihaynta dhaqdhaqaaqa, Xaaladda mugdiga ah, amniga iyo asturnaanta badan, Hawlaha kale.
In kasta oo aan hore u ogaannay taas Pixel ayaa noqon lahaa kan ugu horreeyay ee hela cusboonaysiintaan, Xiaomi Waxay sidoo kale ku dhowdahay inay qayb ka ahaato Android 10 iyo aaladda ugu horeysa ee iskuxiran doonta nolosheeda cusub waxay noqon laheyd My 9t; taasi waa, walaalkii yaraa ee Xiaomi Mi 9T Pro.
Astaamaha ‘Xiaomi Mi 9T’ waxay ka dhigtay taleefanka casriga ah inuu helo caan weyn mana ahan wax la yaab leh haddii aan tixgelinno in qalabku isku daro shaashadda 6.4-inji oo leh xallin 2340 x 1080, 6 GB RAM iyo 48 MP labaal iyo 8 MP, oo ay weheliso batteriga 20 hore iyo 4,000 mAh batari.
XUKUUMADA: kuwan waa taariikhaha iyo moodooyinka Huawei oo u cusbooneysiin doona Android 10
Hadda, sida lagu sheegay macluumaadka ay daabacday AusDroid, Xiaomi wuxuu xaqiijiyay in aaladda mi 9T ay noqonayso tii ugu horreysay ee la helo Android 10 bisha soo socota.
Si kastaba ha noqotee, ma jiro taariikh cayiman oo imaatinka noocaan ah oo loo muujiyey mid ka mid ah aaladeeda hoggaamineed. Intaa waxaa sii dheer, Xiaomi ma daabicin liis muujinaya waxa casriga ah ee qaata Android 10, marka waa inaan xaqiiqdi lahaan lahayn samir oo sugno inaan ogaano.
Waa maxay taleefannada gacanta ee loogu jecel yahay dadka reer Mexico?
Play Store, Gmail iyo barnaamijyo kale oo horeyba qaab madow u leh
Nooca Android 10 ayaa si weyn loogu amaahiyay ku darista “Dark Mode”, oo ah ikhtiyaar badbaadin kara nolosha batariga isla markaana ka hortagaya indhaha, sidaa darteed barnaamijyada qaar ayaa durba bilaabay inay fuliyaan, sida Play Store iyo Gmail.
Dhawaan waxaan ogaan doonaa faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan aaladaha yeelan doona cusboonaysiintaan.
Galitaanka Tani waxay noqon kartaa taleefankii ugu horeeyey ee Xiaomi ee qaata Android 10 waxaa markii ugu horraysay la daabacay dhinac.